Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Shirkadaha Dhismaha & Dhismaha - Shiinaha Warshadda Dhismaha & Dhismaha
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo alaab qeybiyeyaal ah iyo shirkad wax dhoofisa oo leh been abuurka, ridaya, feerista, sameynta qabow iyo laynka daaweynta dusha sare-sida galvanized diirka kulul, dahaadhka zinc iyo dahaadhka budada iwm. Daarista alaabada, abuurista iyo shaambadaha alaabada qalabka ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika in ka badan 20 sano Waxaan haynaa injineero khibrad iyo khibrad u leh oo soo bandhigi kara alaabooyinka sida sawirada ...
Tuuryo Baaxad Weyn
Meelaha waaweyn ee la tuuro: Macdantan weyn ee lebenkeenu waxay daboolaysaa aag dhan 60,000 mitir murabac ah iyo aag dhisme oo ah 23,000 mitir murabac ah. Waxaa jira in ka badan 660 shaqaale, oo ay ku jiraan 180 shaqaale farsamo sare ah iyo 480 shaqaale farsamo oo tayo sare leh. Shirkaddu waa shirkad ku takhasustay soo saarista iyo soo saarista qalabka kala duwan ee birta u adkaysta xirmooyinka u baahan warshadaha sida soo saarista macdanta, metallurgy, tamarta, qalabka dhismaha, iwm.
Qaybaha Qurxinta Waxaan (M&E) nahay soo saare xirfadle ah oo loogu talagalay birta & qaybaha qurxinta birta. iyada oo maareyn horumarsan iyo falsafad istiraatiiji ah oo suuqa ku jihaysan loo helo horumar wanaagsan oo waara marka la eego alaab tayo sare leh iyo sumcad wanaagsan M&E birta qurxinta iyo birta ama wax soo saarka been abuurka ah waxaa laga sameeyaa qalab tayo sare leh, oo ay soo saaraan labadaba habraac dhaqameed dhaqameed iyo hab wax lumay oo noo xaqiijin kara inaan soo saarno noocyo badan oo sare ...
Hordhaca Alaabada M&E waxay dhoofisaa dhuumaha iyo rakibida, isku xidhka, tubooyinka iyo badeecadaha dheecaanka in ka badan 30 sano. Majiro qasabado Hub iyo rakibyo ayaa loo sameeyay sida ASTM A888 American standard, CSAB70 Canadian standard iyo EN877 European standard. kama diiwaangalineyno tuubooyin iyo qalab rakiban IAMPO (oo leh sumadda UPC) ee loogu talagalay "MMCST" iyo CSA ee loogu talagalay "HB". SOO SAARKA Badeecooyinkayaga oo leh tuubooyin iyo qalab, waxaan sidoo kale bixinnaa isku-xirayaasha birta ahama ee cabbirro kala duwan ka jira 1-1 / 2 ”illaa 10” fiiri ...
Isku-xidhka tuubada iyo isku-xidhka birta ahama: Xarkaha tuubada, birta aan-lahayn ee isku-xidhka ah iyo goomayaasha si ballaadhan loogu adeegsado warshadaha dhuumaha saliidda baabuurta, dhuumaha mootada, nidaamka bullaacadaha. Awoodda wax soo saar waa 1 milyan maalintii. Waxaan leenahay khadka wax soo saarka oo dhameystiran: wasakheynta wax soo saarka, waxsoosaarka wax soo saarka, daaweynta dusha sare, vulcanizing caag ah, iyo wax soo saarka fur. Waxa aan qabano Waxaan nahay alaab-qeybiyeyaasha OEM ee la aqoonsan yahay ee shirkadaha waaweyn ee gawaarida u adeegaan wax badan o ...
M&E waxay dhoofisaa dhuumaha iyo rakibidda, isku xidhka, tuubooyinka iyo alaabada bullaacadaha in ka badan 30 sano. Majiro qasabado Hub iyo rakibyo ayaa loo sameeyay sida ASTM A888 American standard, CSAB70 Canadian standard iyo EN877 European standard. kama diiwaangalineyno tuubooyin iyo qalab rakiban IAMPO (oo leh sumadda UPC) ee loogu talagalay "MMCST" iyo CSA ee loogu talagalay "HB". Tuubooyin iyo qalabyo, waxaan sidoo kale ku siinnaa iskuxirayaasha birta ahama ee cabbirro kala duwan leh min 1-1 / 2 ”ilaa 10” bir (ama bir la malleeli karo) tubbada / qaboojiyaha tubbada ...